एक वर्षमै २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा , यस्तो कसरी भयो सम्भव ? – Halkhabar kura
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १४:३१
एक वर्षमै २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा , यस्तो कसरी भयो सम्भव ?
काठमाडौं : महिला ग’र्भ’वती हुनु र बच्चा जन्माउनु कुनै नयाँ र नौलो कुरा त होइन । तर, अष्ट्रेलियामा भने एक वर्षमै करिब २२ जना पुरुष सुत्केरी भएको स्रोतको जानकारी छ । तथ्यांक अनुसार “गत वर्ष २२ जना पुरुष ग’र्भ’व’ती बने र बच्चासमेत जन्माए” – डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिस अष्ट्रेलिया।
अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु सम’लिंगी पुरुष रहेको पनि स्रोतले जानकारी गराएको छ । स्रोतको अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नै यसरी बच्चा जन्माउने ट्रान्सजेन्डर अष्ट्रेलियाली पुरुषको संख्या २ सय २८ रहेको बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक सन् २००९ मा पुरुषले बच्चाको जन्म दिएको घटना सार्वज्निक भएको पनि बताइएको छ । त्यस समय पुरुषले बच्चा जन्माउने विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु अष्ट्रेलियामा समेत विरोधमा उत्रिएका थिए ।
जसका कारण बच्चा जन्माउने पुरुषको नाम गोप्य नै राखिएको थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ, मेलबर्न विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक समलिंगी पुरुषको बच्चा जन्माउने हकको पैरवी गर्दै आएका पनि बताइएको छ।
उनका अनुसार अब लैंगिकताको विषयमा समाजले आफ्नो सोच बदल्ने बेला आएको र उनी भन्छन्, जो पुरुष आफ्नो जीवनमा यस्तो फैसला लिन्छन् उनीहलाई बच्चा जन्माउनमा कुनै समस्या नहुने ।
Next सुन्दै अचम्म : अदालतमा मुद्दा चल्यो अनि मुद्दा जित्यो हाँसको बथानले
धर्तिको सबैभन्दा चिसो बस्तीमा हिउँमुनि यसरी आफैं सल्किरहन्छ आगो! (भिडियोसहित)
२२ पुष २०७८, बिहीबार ०१:२४
यी ६ बर्षिया बालिकाले गरिन् संसारलाई अचम्मै बनाउने यस्तो काम, सन् २०३२ मा नतिजा देखिने
१२ पुष २०७८, सोमबार १७:१८